Miyuu Kylian Mbappe Ku Biirayaa Actual Madrid Haddii Zidane Ka Tago? - Axadle Wararka Maanta
Wargeyska ree Spain ee AS ayaa fahamsan in garabka Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe uu doonayo inuu ku biiro Actual Madrid suuqa xagaaga sanadkan isaga oo aan ku xidhayn qofka uu yahay tababaraha xiga ee kooxdu yeelan doonto.
Mustaqbalka tababare Zinadine Zidane ee Actual Madrid ayaa ah mid halis ku jira iyadoo tababarihii hore ee Juventus ee Massimiliano Allegri iyo halyeeyga kooxda ee Raul Gonzalez ay yihiin kuwa lala xidhiidhinayo booskiisa.
Iyadoo ay jireen warar sheegaya in imaatinka Mbappe uu ku xidhnaan karo mustaqbalka ninka ay France kasoo wada jeedaan ayuu wargeyska AS qabaa aragti gabi ahaanba ka geddisan midaas.
AS ayaa sheegaya in Kylian uu doonayo inuu Los Blancos u wareego isaga oo aan u eegayn shaqsiga uu noqon doono tababaraha kooxdu.
Mbappe oo heshiiskiisa PSG uu yahay mid dhacaya xagaaga 2022 ayuu iska diiday isku day dhawr ah oo ay kooxdu ku doonaysay inay heshiis cusub kaga saxeexato.
Sidoo kale Mbappe ayaan lahayn wax qorshe ah oo uu ku aqbalayo dalabkii ugu dambeeyay ee ay miiska usoo saartay Paris oo ah mid uu mushahar ahaan 36 Milyan oo euro ku qaadanayo sanadkii.
Xaqiiqada ah inuu mushahar 25 Milyan oo euro ah ka aqbali doono Actual Madrid ayaa muujinaysa rabitaankiisa ah inuu Madrid ka ciyaaro dhawaan.
Iyadoo Mbappe uu hakad geliyay heshiis kordhin uu kooxda u sameeyo ayay Actual Madrid dhinaceeda isku dayaysaa inay ku qanciso PSG inay qiime jaban kaga iibiso xagaaga sanadkan halkii ay bilaash kaga qaadan lahayd sanadka dambe.